Cleo ရဲ့ Wish | ထိပ်တန်းအပေါက်ဆိုက်ကို | Mobile Casino Online | £€$800 Deposit Bonus :)
သငျသညျတခုလျောက်ပတ်သောအရေအတွက်ကိုနှင့်တသားတဂိမ်းရှာနေနေတယ်ဆိုရင် အွန်လိုင်းပေါက်အပိုဆု အင်္ဂါရပ်များ, ထို့နောက်ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ဂိမ်းအားဖြင့် Cleo ရဲ့ Wish လုပ်ပေးသင့်တယ်. ဤသည်မှာရှေးခေတ်အီဂျစ်ပုံစံကိုဗီဒီယို slot ကသငျသညျသုံးအခြေစိုက်စခန်းဂိမ်း features တွေနဲ့နှစ်ခုအခမဲ့လည်ဆုကြေးငွေ features တွေစုစုပေါင်းကစားရန်ခွင့်ပြု. အဆုံးတိုင်အောင်အဖတ်ရှုခြင်းအားဖြင့်ဤအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ.
အစောပိုင်းကအပေါ်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း, Cleo ရဲ့ Wish သုံးအခြေစိုက်စခန်းဂိမ်းဆုကြေးငွေ features တွေနှင့်အတူကြွလာ. ဤအင်္ဂါရပ်အားလုံးခြေရင်းဂိမ်းကာလအတွင်းကျပန်းမှာ activated နေကြတယ်. သငျသညျ Fortune မဂ္ဂဇင်း၏တစ်ဦးတွင် Sands ရှိ, တောရိုင်း Reels Add ပြီးအာမခံတောရိုင်း Reels ဒီအွန်လိုင်းပေါက်အပိုဆုဂိမ်းထဲမှာရရှိနိုင် feature.
ဤသည် slot ကဂိမ်းနှင့်အတူကြွလာ5reels နှင့် 25 paylines. အဆိုပါ reels ပေါ်သင်္ကေတများ ankhs ပါဝင်သည်, အဖိုးတန်လက်ကောက်, scarab ကောင်လေးတွေနဲ့ဂိမ်းရဲ့လိုဂို (ထိုသူအပေါင်းတို့မြင့်သောတန်ဖိုးများများ). သငျသညျတခုပါဝင်သည်ဟုစံကစားကတ်များလည်းရှိ, K သည်, မေး, J ကို,9နှင့် 10 (ဤအနိမ့်တန်ဖိုးများများ). အဆိုပါဖြန့်ကြဲထားတဲ့အီဂျစ်ပိရမစ်ဖြစ်ပါသည်နေစဉ်တောရိုင်းအဲဂုတ္တုပြည်ကိုအစိုးရသောမိဖုရားလီယိုပတ်ထဖြစ်ပါသည်.
အခုတော့ပြန်အခြေစိုက်စခန်းဂိမ်းဆုကြေးငွေ features တွေရန်. Fortune မဂ္ဂဇင်း၌သဲသင်ရုံတစျခုက high-တန်ဖိုးကိုသင်္ကေတသို့ reels အပေါ်မြင့်သောတန်ဖိုးသင်္ကေတအဖြစ်ပြောင်းလဲခွင့်ပြု. ဤအတူ, သငျသညျပိုမိုမြင့်မားဆုကြေးငွေများအတွက်ပေါင်းစပ်နှင့်တိုးပွားစေအနိုင်ရရရှိနိုငျ. အဆိုပါ Add တောရိုင်း Reels ကျပန်းပေါ်လာသောနှငျ့သငျရိုင်းသင်္ကေတသည်သင်၏အနိုင်ရအလားအလာတိုးမြှင့်ဖို့ reels ပေါ်တွင်ပေါ်လာကြ. တစ်ဦးတက်ကြွ payline အပေါ်ငါးခုလွင်ပြင်မြေနှင့်ဝင်ငွေ 500 ထိုလုပ်ငန်းစဉ်အတွက်ဒင်္ဂါးပြား. အဆိုပါအာမခံတောရိုင်း Reels များအတွက်, ငါး reels အထိနောက်ထပ်သင်ပိုမိုမကြာခဏအနိုင်ပေးဝင်ငွေရစေခြင်းငှါသူတို့အပေါ်လွင်ပြင်ရပါလိမ့်မယ်.
အဆိုပါ reels လည်ရန်သင်လိုအပ်သမျှသော 30p ၏လက္ခဏာသက်သေပေါင်းလဒ်တစ်ခုဖြစ်သည်. ပိုမိုမြင့်မားသောကစားနည်းကိုဖန်ဆင်းခံရဖို့နှင့်ကစားသမား£ 60 အဖြစ်မြင့်မားတဲ့အဖြစ်လှည့်ဖျားနှုန်းကစားနည်းနေရာနိုငျသောကွောငျ့ပြဌာန်းချက်ရှိပါတယ်.
ဒီအွန်လိုင်းပေါက်အပိုဆုဂိမ်း၏လွတ်လပ်သောလှည့်ဖျား Feature ကို
ဒါကအွန်လိုင်းပေါက်အပိုဆုဂိမ်းနှစ်ခုအခမဲ့လှည့်ခြင်းများနှင့်တကွကြွလာ, အမည်ရ: ထာဝရအစည်းစိမ်ဥစ္စာနှင့် Cleo ရဲ့ Parade. သင် reels အပေါ်သုံးပိရမစ်ကြဲဖြန့် icon တွေကိုတစ်နိမ့်ဆုံးဆင်းသက်အခါတိုင်းအခမဲ့လှည့်ခြင်းများ activated နေကြသည်နှစ်ဦးစလုံး.
သငျသညျကစားရန်နှစ်ခုအခမဲ့လှည့်ခြင်းများရှိမျှအထဲက select လုပ်ရပါလိမ့်မယ်. သင်ထာဝရစည်းစိမ်ဥစ္စာအခမဲ့လှည့်ခြင်းများကို select ပါလျှင်, ထို့နောက်အကြားကစားရန်မျှော်လင့်ထား5နှင့် 10 အခမဲ့လှည့်ခြင်းများ. သို့သျောလညျး, Cleo ရဲ့ Parade reel ပေါ်တက် stacked လီယိုပတ်ထရိုင်း icon များရပါလိမ့်မယ်5ဆင်းသက်အနိုင်ရပေါင်းစပ်ခြင်းနှင့်တကွသင်ကူညီပေးရန်.
ဒီအွန်လိုင်းပေါက်အပိုဆုဂိမ်းနှင့်အတူ, သငျသညျအချိန်ကြာမြင့်စွာကာလအတွက်ဧည့်ခံခံရနြို. အဆိုပါအခြေစိုက်စခန်းဂိမ်းဆုကြေးငွေ features တွေ, အဖြစ်အခမဲ့လှည့်ခြင်းများ, အနိုင်ပေးရဖို့နဲ့သူတို့ရဲ့ဆုကြေးငွေတိုးမြှင့်ဖို့အခွင့်အလမ်းနှင့်အတူကမ်းလှမ်းမှုကိုကစားသမား.